Uncategorized | विनोदका अक्षरहरु
✍️ विनोद पौडेल नेपाल वायू सेवा निगमको दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा करिब साढे चार अर्ब रुपैँया अनियमितता भयो । राष्ट्रिय ढुकुटीको लुट भएको यो प्रसंग केही दिन यता अलि सेलाउँदै गएको छ । राज्यकोषको यति ठूलो दोहनलाइ यसरी लुकाउन खोजिँदा आम जनमानसमा कतै यो घटना यत्तिकै सेलाउँने त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको…
January 14, 2019 in Uncategorized.
विनोद पौडेल पोखरा आफैमा सुन्दर छ । यसलाइ अझै सुन्दर बनाउनुपर्ने छ । तालैतालको नगरीमा दंतलहर झै मिलेको हिमालले पोखरालाइ चम्काएको छ । तर अझै पनि पोखरालाइ सुख छैन, पोखरा चम्किँदा चम्किँदै पनि पोखरालाइ अझै चम्किनु परेको छ । यसको लागी अब पोखरेलीले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । पोखरेलीले २० बर्षसम्म आफ्नो मेयर चुन्न…
✏️विनोद पौडेल दिनभरीको काम, पढाइ र अरु झिनामसिना तनाब र चिन्ताले अलि बढी थकान महशुस हुन्छ अचेल । यो मनमा आफ्नो जिन्दगीको मात्र नभै आफन्त र परिवारको सुन्दर भविष्यको चिन्ता त छँदै छ, त्यो सँगसँगै थोरै भए पनि देशको राजनैतिक अस्थिरता र स्वार्थले ल्याएको गतिरोधले भोली हामी कहाँ पुगौंला भन्ने अर्को तनाब उत्पन्न भएको छ…
विनोद पौडेल हिजो भएको जनयुद्ध र जातिय, साम्प्रदायिक आन्दोलनले देशलाइ कहाँ पुर्यायो भनेर त अब बुद्धि नै नभएको ग्वाँकलाइ पनि बुझाउन नपर्ला । आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पुरा गर्नको लागी विना तुकको आन्दोलन सृजना गरेर प्रचन्ड बाबुरामहरुले नेपाली जनतालाइ पङ्गु त बनाए नै, त्यो भन्दा पनि आज आधा नेपाल नै दक्षिण तिर जाने हो की भन्ने…
विनोद पौडेल यतिबेला सामाजिक संजालमा पानीपुरी बेच्ने एकजना मधेसी वर्णका युवाको फोटो भाइरल बनेको छ । फोटोमा भुइँ भरि पानीपुरी तयार गर्ने सामग्रीहरु छरपस्ट पोखिएका छन् भने ति युवा पोखिएको सामान समाल्दै छन् । देख्दै मायालाग्दो त्यो तस्विरमा लाइक कमेन्ट र सेयरको श्रीङ्खला चलेको छ । कतिपयले स्यावास नेपाली दाजुभाइ यो धो*तीको पानीपुरी पोखिदिएर ठिक…
कति मीठो गीत
प्रिय दाजु प्रेम सागर पौडेलको लय/ शब्दमा नयाँ तीजको गीत माइती घरको कुकुर नि पियारो आएछ । दाजुको मार्मीक शब्द र ठ्याक्कै गाउँले रोधी जस्तो लयले कस्को मन नछोला र? अहिलेको तीजमा सबै दिदीबहिनीहरु दिल खोलेर नाच्ने गीत यो मात्रै होला सायद । उच्छ्रिङखल र परिवार माझ बसेर हेर्नै लाज लाग्ने गीत सुन्न बाध्य नेपाली…
विनोद पौडेल मेरा एक जना खरिदार मित्र छन् । करिब दुइ वर्ष पहिले लोकसेवा आयोग पास गरेर खरिदारको जागिर खाएका उनले अहिले गाउँ विकास समितिमा सचिवको जिम्मेवारी समाल्छन् । खरिदारको जागिर पाउनु पुर्व उनी सामान्य व्यक्ति थिए । चिया पसलमा चियाको विल तिर्ने बेलामा केहीगरि पर्स निकाल्नु परिहाल्छ कि भन्ने डरले अलि पछाडी बस्ने मध्येका…
सबैलाइ बिउँझाउने गीत, एक पटक सुन्नुस त
जनआन्दलन सफल भएपछी भगवान भण्डारीले निकालेको यो गीत। मलाइ क्रान्ति र यसका नाममा जनतालाइ दुख दिएको त्यति मन पर्दैन, तर यो गीतका शब्दरु चै खुब मन पर्छ । ल है सबैले सुन्नुस, कमल थापा, लोकमान कार्कीहरुलाइ पनि सम्झाउँछ यो गीत ले ।
विनोद पौडेल एनेकपा माओबादी अध्यक्ष प्रचन्ड गत साता भारत भ्रमणमा निस्किएपछी नेपालमा उनको भारत भ्रमणको विषयलाइ लिएर धेरै प्रतिक्रियाहरु आए । सामाजिक सन्जालदेखि सन्चारमाध्यमसम्म उनको भारत भ्रमणको विषयलाइ लिएर कटाक्ष र खण्डन भए । प्रचन्ड मात्र होइन, हिजो बाबुराम भट्टराइ भारत जाँदा पनि बिरोध भएको हो। भोली माधव कुमार नेपाल, शुशिल कोइराला, केपी ओली, शेर…